အလုပ်ထွက်လိုက်တယ်ဆိုတာ စိတ်ဓာတ်ကျစရာမဟုတ်ပါဘူး... -
Posted on December 21, 2018 December 21, 2018 Author Megan	Comment(0)
လက်ရှိ လုပ်နေတဲ့ အလုပ်မှာ အဆင်မပြေလို့ ထွက်ချင်နေပြီး ထွက်စာတင်ဖို့ စဉ်းစားနေပေမဲ့လည်း အကြောင်းကြောင်းကြောင့် မထွက်ဖြစ်သေးဘဲ တွေဝေနေတဲ့သူတွေ ရှိနေမယ် ဆိုရင်တော့ ဒီစာလေးကို အချိန်ခဏလေး ပေးပြီး ဖတ်ကြည့်ပေးနော်။
အရင်ဆုံး ကိုယ်က ဘာလို့ထွက်ချင်တာလဲ ဆိုတာကို သေချာ အဖြေထုတ်ပါ ယောင်းတို့ရေ။ ဒီထက် ကောင်းတဲ့ အလုပ်ရထားလို့ ဆိုရင်တော့ ကိစ္စမရှိပေမဲ့ … “ငါကတော့ ဒီ company မှာ မလုပ်ရတော့ရင် ပြီးရော” ဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ နောက်အလုပ်တစ်ခု မရသေးဘဲ ထွက်ကို ထွက်ရမှကျေနပ်မှာ ဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ဘက်က ကြိုတင် ပြင်ဆင်မှုတွေ လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အလုပ်တစ်ခုကနေ ထွက်လိုက်တဲ့အခါ လစာအပြင် တခြားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆုံးရှုံးရမှာတွေက များနေလို့ပါ။
အလုပ်က ထွက်ပြီးပြီးချင်း တစ်ပတ်လောက်ကတော့ အိပ်ရာထချင်တဲ့အချိန် ထ၊ စားလိုက် သောက်လိုက် ရုပ်ရှင်လေးကြည့်လိုက်နဲ့ သာသာယာယာပဲ ဖြစ်နေမှာဆိုပေမဲ့ တစ်ပတ်ကျော်လာပြီး နောက်ပိုင်းမှာတော့ မနက်နိုးလို့ အလုပ်သွားနေကျ အချိန်မှာ သွားစရာ အလုပ်မရှိတော့တဲ့ အခါ၊ ရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရတာ ငြီးငွေ့လာတဲ့အခါ၊ ဘာမှလုပ်စရာမရှိဘဲ ငြီးငွေ့လာတတ်ပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက ပျင်းလို့ အွန်လိုင်းတက်တဲ့အချိန် သူများတွေအဖွဲ့အစည်းနဲ့ အလုပ်လုပ်နေတာတွေ၊ အလုပ်က ဒင်နာသွားကြတာတွေ၊ အရင်အလုပ်က ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ အပြင်သွားဘာညာ လုပ်ကြတာကို မြင်လာတဲ့ အခါ ငါက တစ်ယောက်တည်းပါလား ဆိုတာကြီးကို တွေးရင်း အချိန်ကြာလာတဲ့အခါမှာ စိတ်ဓာတ်ပါ ကျလာနိုင်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် အဓိကကတော့ အလုပ်ထွက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို မချလိုက်ခင်မှာ ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကို အများကြီးပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှ အလုပ်ထွက်လိုက်ပေမဲ့လည်း နောက်အလုပ်တစ်ခုမရခင်အတွင်းမှာ စိတ်လေမသွားဘဲ ကြိုတင်အားမွေးနိုင်မှာလေ။ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ဆက်လေ့လာပါ။ သင်တန်း ဆက်တက်ချင်တက်၊ မတက်ချင်ဘူးဆိုရင်လည်း တစ်နေ့ကို ၂နာရီလောက်အချိန်ပေးပြီး YouTube၊ google တွေကနေတစ်ဆင့် လေ့လာပါ။
နောက်ပြီး အလုပ်ရှာပေးတဲ့ အေဂျင်စီတွေ၊ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်တွေ မှာ ကိုယ့်အတွက် အခွင့်အလမ်းတွေကို စောင့်ကြည့်နေပါ။ ကိုယ့်ရဲ့  CV form (ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း) ကို သေချာပြင်ဆင်ထားပြီး အဲဒီနေရာတွေကနေတစ်ဆင့် အလုပ်လျှောက်ပါ။
ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ အားကစား တစ်ခုခုကိုပါ အချိန်ပေးပြီး လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တစ်ယောက်တည်း နေရတာများလာတဲ့အခါ အချိန်ကုန်တာက ပိုကြာသလို ခံစားရပြီး အထီးကျန်လာနိုင်တာမို့လေ။
သူငယ်ချင်းအသစ်တွေ ရှာပြီး မိတ်ဖွဲ့ပါ။
ကိုယ်တက်နေတဲ့ သင်တန်းက ဖြစ်ဖြစ် အားကစားအဖွဲ့အစည်း တွေကပဲဖြစ်ဖြစ် မိတ်ဆွေအသစ်တွေဖွဲ့ပြီး အတူတူ စကားစမြည်ပြောရင်း အချိန်ဖြုန်းတာကလည်း အိမ်မှာ တယောက်တည်း Facebook သုံးနေတာထက်စာရင် ကိုယ့်အတွက် ပိုအကျိုးရှိပါတယ်နော်။
ဝါသနာပါပေမဲ့ အရင်တုန်းကအချိန်မရှိလို့ မလုပ်ခဲ့ရတဲ့ အရာလေးတွေကို ပြန်လုပ်ကြည့်ပါ။ (ဥပမာ – သစ်ပင်လေးတွေ စိုက်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်၊ ပန်းချီဆွဲတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်၊ Handmade (လက်လုပ်) ပစ္စည်းလေးတွေ လုပ်တာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။)
အရင်က အလုပ်မှာ တစ်နေကုန်နေရတော့ မိသားစုနဲ့တွေ့ဖြစ်တဲ့အချိန်က ရှားတယ်လေ။ အဲ့တော့ နောက်အလုပ်တစ်ခုမရခင်စပ်ကြားမှာ ကိုယ့်ရဲ့ အဖေ၊ အမေ၊ မောင်နှမတွေနဲ့ အတူတူ အချိန်ကုန်ဆုံးပါ။ မောင်လေး ညီမလေးတွေ ရှိရင်လည်း သူတို့နဲ့အတူတူ အပြင်ထွက်မုန့်စားပြီး သူတို့ သွားချင်တဲ့နေရာလေးတွေ လိုက်ပို့ပေးလိုက်ပေါ့နော့်။
ဒီအပေါ်က အချက်ကလေးတွေ အတိုင်းလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အလုပ်ထွက်လိုက်ပြီးပေမဲ့လည်း စိတ်လေနေစရာ၊ စိတ်ဓာတ်ကျနေစရာ မရှိတော့ဘူးလေ။ အိပ်ချိန်မှန်မှန်နဲ့ အိပ်ရေးဝဝ အိပ်၊ အစားကို ပုံမှန်စားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း အရင်အလုပ်သွားနေတုန်းကလိုပဲ ကြည့်ကောင်းနေအောင် ပြင်ဆင်ဖို့လည်း သတိပေးပါရစေ။ ဒါမှ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ နောက်အလုပ်အတွက် အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီး တက်တက်ကြွကြွနဲ့ ရှေ့ဆက်နိုင်မှာပေါ့။
အလုပျထှကျလိုကျတယျ ဆိုတာ စိတျဓာတျကစြရာ မဟုတျပါဘူး… ဒါပမေဲ့ ………….
လကျရှိ လုပျနတေဲ့ အလုပျမှာ အဆငျမပွလေို့ ထှကျခငျြနပွေီး ထှကျစာတငျဖို့ စဉျးစားနပေမေဲ့လညျး အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ မထှကျဖွဈသေးဘဲ တှဝေနေတေဲ့သူတှေ ရှိနမေယျ ဆိုရငျတော့ ဒီစာလေးကို အခြိနျခဏလေး ပေးပွီး ဖတျကွညျ့ပေးနျော။
အရငျဆုံး ကိုယျက ဘာလို့ထှကျခငျြတာလဲ ဆိုတာကို သခြော အဖွထေုတျပါ ယောငျးတို့ရေ။ ဒီထကျ ကောငျးတဲ့ အလုပျရထားလို့ ဆိုရငျတော့ ကိစ်စမရှိပမေဲ့ … “ငါကတော့ ဒီ company မှာ မလုပျရတော့ရငျ ပွီးရော” ဆိုတဲ့အတှေးနဲ့ နောကျအလုပျတဈခု မရသေးဘဲ ထှကျကို ထှကျရမှကနြေပျမှာ ဆိုရငျတော့ ကိုယျ့ဘကျက ကွိုတငျ ပွငျဆငျမှုတှေ လုပျထားဖို့လိုပါတယျ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ အလုပျတဈခုကနေ ထှကျလိုကျတဲ့အခါ လစာအပွငျ တခွားစိတျပိုငျးဆိုငျရာ ဆုံးရှုံးရမှာတှကေ မြားနလေို့ပါ။
အလုပျက ထှကျပွီးပွီးခငျြး တဈပတျလောကျကတော့ အိပျရာထခငျြတဲ့အခြိနျ ထ၊ စားလိုကျ သောကျလိုကျ ရုပျရှငျလေးကွညျ့လိုကျနဲ့ သာသာယာယာပဲ ဖွဈနမှောဆိုပမေဲ့ တဈပတျကြျောလာပွီး နောကျပိုငျးမှာတော့ မနကျနိုးလို့ အလုပျသှားနကြေ အခြိနျမှာ သှားစရာ အလုပျမရှိတော့တဲ့ အခါ၊ ရုပျရှငျတှကွေညျ့ရတာ ငွီးငှလေ့ာတဲ့အခါ၊ ဘာမှလုပျစရာမရှိဘဲ ငွီးငှလေ့ာတတျပါတယျ။ ပိုဆိုးတာက ပငျြးလို့ အှနျလိုငျးတကျတဲ့အခြိနျ သူမြားတှအေဖှဲ့အစညျးနဲ့ အလုပျလုပျနတောတှေ၊ အလုပျက ဒငျနာသှားကွတာတှေ၊ အရငျအလုပျက ကိုယျ့ရဲ့လုပျဖျောကိုငျဖကျတှေ အပွငျသှားဘာညာ လုပျကွတာကို မွငျလာတဲ့ အခါ ငါက တဈယောကျတညျးပါလား ဆိုတာကွီးကို တှေးရငျး အခြိနျကွာလာတဲ့အခါမှာ စိတျဓာတျပါ ကလြာနိုငျပါတယျ။
ဒါကွောငျ့ အဓိကကတော့ အလုပျထှကျဖို့ ဆုံးဖွတျခကျြကို မခလြိုကျခငျမှာ ကိုယျ့ရဲ့စိတျဓာတျကို အမြားကွီးပွငျဆငျထားဖို့ လိုပါတယျ။ ဒါမှ အလုပျထှကျလိုကျပမေဲ့လညျး နောကျအလုပျတဈခုမရခငျအတှငျးမှာ စိတျလမေသှားဘဲ ကွိုတငျအားမှေးနိုငျမှာလေ။ ကိုယျ့အလုပျနဲ့ ပတျသကျတဲ့ အကွောငျးအရာတှကေို ဆကျလလေ့ာပါ။ သငျတနျး ဆကျတကျခငျြတကျ၊ မတကျခငျြဘူးဆိုရငျလညျး တဈနကေို့ ၂နာရီလောကျအခြိနျပေးပွီး YouTube၊ google တှကေနတေဈဆငျ့ လလေ့ာပါ။
နောကျပွီး အလုပျရှာပေးတဲ့ အဂေငျြစီတှေ၊ ဝကျဘျဆိုဒျတှေ မှာ ကိုယျ့အတှကျ အခှငျ့အလမျးတှကေို စောငျ့ကွညျ့နပေါ။ ကိုယျ့ရဲ့ CV form (ကိုယျရေးရာဇဝငျအကဉျြး) ကို သခြောပွငျဆငျထားပွီး အဲဒီနရောတှကေနတေဈဆငျ့ အလုပျလြှောကျပါ။
ဖွဈနိုငျမယျဆိုရငျတော့ အားကစား တဈခုခုကိုပါ အခြိနျပေးပွီး လုပျစခေငျြပါတယျ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တဈယောကျတညျး နရေတာမြားလာတဲ့အခါ အခြိနျကုနျတာက ပိုကွာသလို ခံစားရပွီး အထီးကနျြလာနိုငျတာမို့လေ။
သူငယျခငျြးအသဈတှေ ရှာပွီး မိတျဖှဲ့ပါ။
ကိုယျတကျနတေဲ့ သငျတနျးက ဖွဈဖွဈ အားကစားအဖှဲ့အစညျး တှကေပဲဖွဈဖွဈ မိတျဆှအေသဈတှဖှေဲ့ပွီး အတူတူ စကားစမွညျပွောရငျး အခြိနျဖွုနျးတာကလညျး အိမျမှာ တယောကျတညျး Facebook သုံးနတောထကျစာရငျ ကိုယျ့အတှကျ ပိုအကြိုးရှိပါတယျနျော။
ဝါသနာပါပမေဲ့ အရငျတုနျးကအခြိနျမရှိလို့ မလုပျခဲ့ရတဲ့ အရာလေးတှကေို ပွနျလုပျကွညျ့ပါ။ (ဥပမာ – သဈပငျလေးတှေ စိုကျတာမြိုးဖွဈဖွဈ၊ ပနျးခြီဆှဲတာမြိုးဖွဈဖွဈ၊ Handmade (လကျလုပျ) ပစ်စညျးလေးတှေ လုပျတာမြိုးဖွဈဖွဈပေါ့။)
အရငျက အလုပျမှာ တဈနကေုနျနရေတော့ မိသားစုနဲ့တှဖွေ့ဈတဲ့အခြိနျက ရှားတယျလေ။ အဲ့တော့ နောကျအလုပျတဈခုမရခငျစပျကွားမှာ ကိုယျ့ရဲ့ အဖေ၊ အမေ၊ မောငျနှမတှနေဲ့ အတူတူ အခြိနျကုနျဆုံးပါ။ မောငျလေး ညီမလေးတှေ ရှိရငျလညျး သူတို့နဲ့အတူတူ အပွငျထှကျမုနျ့စားပွီး သူတို့ သှားခငျြတဲ့နရောလေးတှေ လိုကျပို့ပေးလိုကျပေါ့နေျာ့။
ဒီအပျေါက အခကျြကလေးတှေ အတိုငျးလုပျမယျဆိုရငျတော့ အလုပျထှကျလိုကျပွီးပမေဲ့လညျး စိတျလနေစေရာ၊ စိတျဓာတျကနြစေရာ မရှိတော့ဘူးလေ။ အိပျခြိနျမှနျမှနျနဲ့ အိပျရေးဝဝ အိပျ၊ အစားကို ပုံမှနျစားပွီး ကိုယျ့ကိုယျကိုယျလညျး အရငျအလုပျသှားနတေုနျးကလိုပဲ ကွညျ့ကောငျးနအေောငျ ပွငျဆငျဖို့လညျး သတိပေးပါရစေ။ ဒါမှ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျ ယုံကွညျမှုအပွညျ့နဲ့ နောကျအလုပျအတှကျ အဆငျသငျ့ဖွဈပွီး တကျတကျကွှကွှနဲ့ ရှဆေ့ကျနိုငျမှာပေါ့။
Tagged depression, do, Job, not, quitting, tips, to
ကျွန်မနာမည်ကတော့ မေသူသူအောင်ဖြစ်ပါတယ်။For Her Myanmar မှာ Fashion နဲ့ Beauty ပိုင်း ကို အဓိကရေးနေတဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပြီး အခြားပြင်ပ ဗဟုသုတလေးအချို့နဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် စာလေးတွေလည်း ရေးဖြစ်ပါတယ်။
​ယောင်းတို့အလုပ်​မှာ ကြုံ​နေရတဲ့ စိတ်​ဖိစီးမှုတွေကို ဘယ်​လို တိုက်ထုတ်​ကြမလဲ။
Posted on April 3, 2017 April 3, 2017 Author
ရိုလာကိုစတာစီး​နေရသလို ကြုံ​နေရတဲ့ အဲဒီ အလုပ်နဲ့ပက်သက်တဲ့ စိတ်ဖိစီးမှုတွေကို ​ကျော်​လွှားဖို့ ဖတ်​ကြည့်​လိုက်​​ပါ​နော်​။
Posted on February 1, 2018 Author Youth Thu
ကိုယ်လုပ်နေရတဲ့ အလုပ်ခွင် ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ ကိုယ်နဲ့ လားလားမှ မကိုက်လို့ ထင်နေကြပြီလား? အလုပ်ကို ငြီးငွေ့နေပြီလား? ဘယ်လိုမှ မပျော်နိုင်တော့ဘူးလား? တစ်ကြိမ်တစ်ခါလောက် သတ္တိရှိရှိ ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။
အလုပ်ခွင်မှာ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဆန်တဲ့ ယောင်းတွေဖြစ်လာစေဖို့
Posted on February 26, 2018 April 18, 2018 Author Myat Moe
ပရိုကျကျ အလုပ်လုပ်တော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒါလေးတွေတော့ လိုပါမယ်..
အရပ်သုံးအင်္ဂလိပ်စကားမှ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အင်္ဂလိပ်စကားဆီသို့